အရေးပေါ်ဝက်ခြံ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » How To.. » အရေးပေါ်ဝက်ခြံ
Posted by ၀င့်ပြုံးမြင့် on Sep 29, 2013 in How To.. | 23 comments
ဓာတ်ပုံကောင်းကောင်းမတင်တတ်လို့ စမ်းတင်ရင်း အိမ်ထောင်ရှင်မ များအတွက် အရေးပေါ်ဝက်ခြံလေးအကြောင်း ပြောပြချင်တာပါ။ ကလေး ၆လသားဆိုရင် ဘယ်လိုမှ ထိန်းမနိုင်တော့ဘဲ ၀မ်းလျားမှောက်ပြီး တစ်အိမ်လုံးအနှံသွားတာဆိုတော့ လှေကားပေါ်က ပြုတ်ကျမှာလည်း စိုးရိမ်ရတယ်။ ကလေးအနားမှာ တချိန်လုံးလည်း မနေနိုင်တော့ ကလေးအတွက် ၀က်ခြံလေး လုပ်ဖို့ စဉ်းစားမိပါတယ်။ စဉ်းစားပြီဆိုတာနဲ့ ပထမဆုံးတွေးမိတာက လက်သမားဆရာခေါ်ဖို့ပါပဲ။ ပျဉ်ချပ်ကို ပိတ်စပတ်ပြီး ၀က်ခြံလုပ်ဖို့ တော်တော်စဉ်းစားခဲ့တာပါ။ နောက်မှ ဖျတ်ခနဲ အတွေးပေါ်တယ်။ အိမ်မှာရှိတဲ့ အ၀တ်ထည့်တဲ့ကော်ဘုံးတွေကို စီပြီး ၀က်ခြံလုပ်ဖို့။
ဒီလိုနဲ့ အ၀တ်ထည့်တဲ့ကော်ဘုံး ၄လုံး စီချပြီး လွယ်လင့်တကူ ၀က်ခြံလေးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ခုခေတ်က အိမ်တိုင်းလိုလို အ၀တ်ထည့်ကော်ဘုံးတွေ သုံးကြတော့ အရေးပေါ် ၀က်ခြံလုပ်မယ်ဆိုရင် ကော်ဘုံးဟာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ပျဉ်ချပ်သုံးမယ်ဆိုရင် စောင်းတွေက မာတော့ ကလေးခေါင်းနဲ့ တိုက်မိရင် မကောင်းဘူး။ ကော်ဘုံးကတော့ စောင်းတွေလုံးနေတော့ အန္တရာယ်ကင်းတယ်။ အပူအအေးမျှတတဲ့နေရာ၊ ချက်ရင်းပြုတ်ရင်း လှမ်းမြင်ရတဲ့ ထမင်းစားခန်းလိုနေရာမှာ ထောင့်တစ်ထောင့်ကို ယူပြီး တစ်ဖက်ကနေ ကော်ဘုံးတွေ စီချလိုက်ရုံပါပဲ။
အရေးပေါ် ၀က်ခြံလေးဟာ ကလေး ၆ လသားကနေ ၁၁ လသားအထိလောက် အသုံးဝင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ့ထက်ကြီးရင်တော့ မရတော့ဘူး။ ကလေးက ကော်ဘုံးပေါ်ကနေ ကျော်ထွက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်ရှင်မများး သက်သက်သာသာ နေနိုင်ကြပါစေ။
သမီးပိစိတုံးကတော့… အဲလိုပုံးထားရင်.. အတင်းဖွင့်ပြီး.. အထဲကဟာတွေစိတ်ကြိုက်ထုတ်ဖွတော့တာပဲ…
ဆိုတော့… အခန်းထဲ.. ဖော့ပြားခင်း..။ တံခါးဝမှာ .. ခြံစည်းရိုးခတ်ထားရသပေါ့…
အန်တီလား ခည ….
ခလေးလေးကလည်း ချစ်ချာလေး ….
ကလေးခေါင်းနဲ့ ကော်ဗူးအဖုံးပိတ်နဲ့လည်း ခြစ်မိ စောင့်မိသွားဦးမယ်ဗျ …
အဲ့ဒါကြီး ချွတ်ထားလိုက်ရင် ကောင်းမလားလို့ ..
အိမ်​က က​လေး​တွေတုန်းက မနဲထိန်းလိုက်​ရတယ်​
အစ်မနဲ့ အစ်မ သားသားလေးကို
အခုလို ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင် တွေ့ ရလို့ 
အစ်မ သားသားလေးက ချစ်ချာလေးဗျာ
အရေးပေါ်ဝက်ခြံဆိုတော့ အမျိုးသမီးတွေ ပွဲကြီးလမ်းကြီးသွားခါနီး ၀က်ခြံပေါက်လို့ အကြီးအကျယ်စိတ်ညစ်ရတာအတွက် ရေးတာလို့ ထင်လိုက်မိတာ။ :harr:
မပြုံးရဲ့ ကလေးဝက်ခြံက လွယ်ကူသက်သာတဲ့နည်းမို့ အတော်အဆင်ပြေတာပဲ။
fb မှာ အဲလို အလွယ်တကူရှိတာတွေနဲ့ လုပ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေတွေ့ရင် အတော်သဘောကျတာ။
ဒီမှာကျတော့ အဲလို့ပုံးမှာ ဘီးလေးတွေနဲ့ဗျ။
ဖြုတ်ပြီး သုံးရမဲ့ အမျိုးပဲ။
တကယ်အရေးပေါ်ရင်တော့ အသုံးဝင်မှာမို့ ကျေးဇူးပါ။
ဟီးးးးးးးးးး ဟုတ်ပါ့မမရေ။ ကျွန်မလဲ မျက်နှာပေါ်က၀က်ခြံမှတ်လို့။ ဒါ့ပုံကြည့်ပီး ဘာပါလိမ့်ဆိုပြီး စာဖတ်တော့မှသဘောပေါက်သွားတော့တယ်။
ကျုပ်ငယ်ငယ်က.. လေးဖက်ထောက်သွားရင်.. ကုလားထိုင်စွန်း၊ မတ်တတ်ရပ်ပြေးရင်.. စားပွဲစွန်းတွေနဲ့ စောင့်မိတတ်လို့.. ခေါင်းမှာ ဘုမျိုးစုံနဲ့လို့.. အမေပြောဖူးတာမှတ်မိတယ်…
ဒါနဲ့…..ဒီပုံကအမဝင့်ပြုံးမြင့်ပုံလား….ကျ နော်ကအပျိူကြီးမှတ်လို့….။
အော် လူရာမ၀င်တဲ့ ဘ၀…။
ကိုခြောက်မျက်နှာ၊ အလက်ဇင်းနဲ့ ကိုကြီးမိုက် တို့ရေ…
ကလေးက ချစ်စရာမကောင်းပါဘူး။ မျောက်ရယ်၊ ၀က်ရယ်၊ ခွေးရယ် သုံးမျိုးစပ်ထားတာပါ။ မျောက်လိုပဲ ဆော့ပြီး ၀က်လိုစားတယ်။ ပြီးတော့ ခွေးလို တွေ့သမျှကိုက်နေတာပဲ။ ပုံထဲက ကလေးမအေကိုသာကြည့်တော့၊ နားထင်နားရင်းတွေ ချိုင့်ပြီး မျက်နှာဟောက်ပက်ဖြစ်နေတာ။ ကိုယ့်ရုပ်တောင် ကိုယ်ပြန်မကြည့်ချင်အောင် စိတ်ပျက်တာ။
ကိုဆာမိ၊ မခိုင်ဇာ၊ မမ၊ မသဲနု နဲ့ ကိုဘလက်ရေ
ခလေးထိန်းရတာ အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့လူတွေက ဘယ်လောက်ပင်ပန်းတယ်ဆိုတာ မသိကြဘူး။ မပြုံးက အိမ်မှာ တခြားဆွေမျိုးသားရင်းလည်း မရှိတော့ ခဏကလေးတောင် မနားရတာ။ ပထမသမီးတုန်းက ၀က်ခြံ (လူခြံပေါ့လေ) လုပ်မယ်လုပ်မယ်နဲ့ လက်သမားဆရာခေါ်လိုက်သေးတယ်။ နောက်တော့ မလုပ်ဖြစ်ဘဲ ခလေးက ကြီးသွားရော။ အကြံတစ်ချက်ပေါ်ရင် ပြီးမယ့်ကိစ္စကို အကြံမပေါ်တော့လည်း ကြာနေတာပေါ့။
မြန်မာပြည်ရဲ့ မြို့စုတ်လေးမှာက ဗမာအိမ်ပုံစံတွေက လေးပင်သုံးခန်း၊ သုံးပင်နှစ်ခန်း အဲလိုမျိုးတွေလေ။ အနောက်တိုင်းအိမ်ပုံမျိုး မဟုတ်တော့ သူကြီးပြထားသလို လူခြံ ဘယ်လုပ်လို့ရမလဲ။ ဒီကအိမ် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်က ဗမာအိမ်ပုံဆိုတော့ အိမ်ရှေ့ကနေ ၀င်တာနဲ့ ဧည့်ခန်း၊ထမင်းစားခန်း၊ မီးဖို၊ ရေချိုးခန်းထိ တိုးလျှိုးပေါက်ပေါ့။ အခန်းကန့်ထားတာမျိုးနည်းပါတယ်။ ညအိပ်မှ အပေါ်တက်အိပ်ကြတာ။
ထမင်းစားခန်းဆိုလည်း အဲလိုပဲ ပန်းကန်တွေ ဇလုံတွေကို မှန်ဘီရိုထဲထည့်ထားကြတယ်။ လိုချင်တာကို ဒက်ခနဲတွေ့ပြီး ယူနိုင်အောင်လို့။ မျှစ်ကြော်လည်း အိမ်ထောင်ကျတော့ အဲဒီဘီရိုကြီးတွေ ယောက္ခမဆီက အမွေရထားတာ .. ဟီး။ အဲဒါကြီးတွေ ဘယ်မှရွှေ့မရဘူး။ ဒီတိုင်းထားရတယ်။ ခလေးကိုတော့ နည်းနည်းကြီးရင် အဲဒီနားကနေ ရွှေ့မှာပါ။
ရန်ကုန်အမြင်မှာဆိုရင်တော့ ဒီလိုပုံနေကြတာ အရမ်းတောကျတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အားလုံးကို တိုးလျှိုးပေါက်လုပ်ထားတာဟာ ထရန်ပရင်စီ မူဝါဒကို လက်တွေ့ကျကျ ကျင့်သုံးထားတာနော။ျေပါ့သေးသေး မှုတ်ဘူး။
တစ်ခါအဲ့လိုဘဲ ကလေးလေးတစ်ယောက် အဲ့သလိုဘဲ
တစ်အားဆော့တယ်ပြောရမလား ( ကလေးဟာကိုး )
မင့်တုန်းက ရိုင်ပတ်နဲ့တောင်ကာထားရတယ် ဒဲ့
ဆြာပုရေ ရိုင်ပတ်ဆိုတာ မျှစ်ကြော် မသိဘူး။ ကလေးမို့ဆော့တယ် မထင်ပါနဲ့ ဆြာပုရယ် ကလေးက မွေးကတည်းက သူ့သန္ဓေနဲ့သူလာတာ။ သမီးကြီးတုန်းက အင်မတန်အေးတယ်။ ခုထိလည်း အေးတာပဲ။ ဦးနှောက်ကလွဲရင် တခြား ဘာအလုပ်မှ မလုပ်ဘူး။ ထမင်းတောင် ခွံ့ပေးမှစားတယ်။ စကားပြောတာ ဥာဏ်သုံးတာ ရစ်တတ်တာကတော့ ရှားစံပဲ။ အခုမွေးတဲ့သားကတော့ တကယ့် ဗရုတ်သုတ်ခ။
ပို့စ် လေး မြင်တော့ မမန့်ပဲ မနေနိုင်ဘူး ဖြစ်သွားတယ်
သမီး (၉)လ အရွယ်လောက်က တွန်းလှည်းအ၀ိုင်းလေးထဲ ထည့်ထားလိုက်ရင် သူ့ဘာသာ လျှောက်သွားနေတဲ့ တွန်းလှည်းထဲ ထည့် လွှတ်ထားပေးလိုက်တယ်
သူ့ဘာသာ တအိမ်လုံး လျှောက်ပြေးနေတော့တာပေါ့
သူ့ လက်မှီ နိုင်တဲ့ နေရာ က မီးခလုတ်တွေ တိတ်တွေနဲ့ အုပ် အချွန်အတက်တွေ ဖယ် ဆေးပုလင်းတွေ အမြင့်တွေ ရွှေ့ထားရတယ် ၊ အဲဒီတုန်းက နေတာ သစ်သားနှစ်ထပ်အိမ်မှာ အပေါ်ထပ်နေတော့ အောက်ဆင်းတဲ့ လှေကားထိပ်က တံခါးလေးကို အမြဲပိတ်ထားရတယ်
တစ်ရက် ကိုယ်တိုင်က ရေးချိုးခန်းထဲဝင် အေးအေးဆေးဆေး ရေးချိုး အပြင်က ဖြစ်နေတာတွေ မသိဘူး
အပြင်ရောက်မှ သမီး နှုတ်ခမ်းက ဖူးယောင်နေတာပဲ
ဖြစ်ပုံက အိမ်ကိုလာလည်တဲ့ သူ့အမ ၀မ်းကွဲလေး (၂ နှစ်လောက်)က
အောက်ထပ်ဆင်းတော့ လှေကားထိပ်က တံခါးကို ဖွင့်သွားတယ် သမီးကလဲ သူ့အမ နောက်ကို ပြေးအလိုက် တွန်းလှည်းရော လူပါ လှေကား ၁၀ ထစ်လောက် ဒီ အတိုင်း လျောကျသွားတယ် ကံကောင်းလို့ ကျွမ်းပြန် မသွားတယ်…
ကလေး တာဝန်တွေကတော့ မသေးဘူး မွေးစကလဲ ညဘက် လက်နဲ့ဖိမိမှာ သူတို့ မှောက်ရက်ဖြစ် အသက်ရှုပိတ်မှာ မီးခလုပ်ထဲ လက်နှိုက်မှာ တွေ့တာတွေ ပါးစပ်ထဲ ထည့်မှာ ……ပူရတာက အများသား
တော်တော် ပင်ပန်းခဲ့တာကလား အခုဆို အဖေ့ ပုခုံးတောင် မှီလာပြီ
ကြီးလာရင် လဲ စိတ်ပူရမှာ ငယ်တုန်းကထက်တော့ လျော့မယ် မထင်
မအူပင်က သူငယ်ချင်းဆီ လာလယ်ဖြစ်မှ ဒေါ်မြှစ်ကြော်ဆီ လာတွေ့ ချင်ပါသေးတယ်
ဦးနိုလည်း ရွာထဲ ပြန်လာပြီပေါ့။ ဦးနိုပြောတဲ့တွန်းလှည်းမျိုး ၀ယ်တော့ဝယ်ထားတယ်။ ဒါပေမယ့် အသုံးမ၀င်ဘူး။ ကောင်လေးက တွန်းလှည်းပေါ်ခွတက်လို့။ ဒီကောင်လေး တော်တော်သောင်းကျန်းတာ။ မျှစ်ကြော်မှာ တစ်ချက်ကလေးမှကို မနားရဘူး။ ရေချိုးခန်းဝင်တာတောင် သူ့ချီထားပြီး ၀င်ရတယ်။ ထမင်းစားပြီးရင်လည်း ရေမသောက်နိုင်ဘူး။ ဒါတောင်အိမ်ကလူကြီးက အကုန်လုပ်ပေးထားတာ။ မနက် ၄နာရီထပြီး သူက ရေတင်တာ၊ ထမင်း အိုးတည်၊ ရေနွေးတည်၊ လက်ဖက်ရည်ဖျော်၊ သမီးကိုသနပ်ခါးလိမ်းပေးပြီး ကျောင်းပို့၊ အပြန်ဈေးဝယ်၊ ပြီးမှ အလုပ်သွား၊ သူ အဲဒီလောက်ထိ လုပ်ပေးထားတာတောင် မျှစ်ကြော် တကယ်ပင်ပန်းတယ်။ သမီးတုန်းက သိပ်မပင်ပန်းလှဘူး။ အခု ဒီကောင်လေးနဲ့ကျမှ။
ဒီလို နဲ့ လမ်းစမ်းလျှောက်တော့မယ်။ နောက် ကျောင်းသွားချိန်ရောက် တော့မယ်။
ပညာရှိ ပြီး သူတို့အတွက် စဉ်းစားပေးနိုင်တဲ့ အမေ နဲ့ မို့ ကလေးတွေ ကံကောင်းတယ် ပြောရမှာ။
အိမ်က တူမ အကြီးလေးတုံးက အိမ်ပေါ်ထပ်လှေခါးဝကို သဂျီးကာသလို သစ်သားဝက်ခြံလေး ကာထားရတယ်။
အဲဒီအချိန်က လူအားတွေ များသမို့ ကလေးက လူတွေ လက်ပေါ်မှာ ချည်းပဲ။
သားဦးဆိုတာ အဲသလို ချစ်ခံရတာ။
အမ၀မ်းကွဲတယောက်ငယ်ငယ်က သူ့အမေ ကိုယ့်အဒေါ်က ထမင်းချက်ချိန် ကလေးကို ကြက်မွေးလေးတွေ ၀ိုင်းထားတယ်တဲ့။ကလေးက ကြက်မွေးကို ကြောက်တော့ မလှုပ်ရဲဘူးတဲ့။
အဲဒါမျိုးကတော့ ကလေးမှာ ဖိုးဘီးယားခေါ်တဲ့ ကြောက်စိတ် ၀င်နိုင်တာမို့ မလုပ်သင့်ပါဘူး။
အဲဒါတွေကြောင့် ကလေးထိန်းစရာ မလိုတဲ့ အပျိုဂျီးလုပ်ကြပါလို့ ရွာသူတွေကို ပြောနေတာ။
(ဦးကျောက် မောင်အံ မောင်ဂီ မမြင်စေရ)
အထင်မကြီးပါနဲ့။ မျှစ်ကြော် ပညာမရှိပါဘူး။ အပြောတခြား အလုပ်တခြားလူပါ။
ပို့စ်တစ်ပုဒ်မှာ အန်တီမာ မန့်ထားတာလေးရှိတယ်။ မိဘတွေဟာ သားဦးသမီးဦးကို ပိုချစ်တတ်ကြသလား မသိဘူး၊ ကိုယ်တိုင်ကတော့ ဒီအချက်ကို ဘယ်တော့မှ မသိနိုင်တော့ဘူး ဆိုတာလေ။ အဲဒီတုန်းက ၀င်မန့်ချင်ပေမယ့် လော့အင်ဝင်မရလို့ပါ။
အမှန်ပါပဲ အန်တီမာရေ၊ သားတွေသမီးတွေကြီးလာရင် အတူတူပဲချစ်တယ်လို့ ပြောရမယ်ဆိုတာ ဦးနှောက်ကသိထားတယ်။ ဒါပေမယ့် ရင်ထဲက အမှန်တရားကတော့ သမီးကြီးကိုသာ အချစ်ဆုံးပါပဲ။ ကြုံတုန်းကြွားရဦးမယ်။ သမီးကြီးက အမေ့အလှအပတွေ ဘာတစ်ခုမှ အမွေရမထားဘူး။ သာမန်ရွက်ကြမ်းရေကြိုလေး ဖြစ်နေတယ်။ အံ့သြစရာပဲ။ သားငယ်က အသားအရည်ကအစ သမီးထက် အားလုံးသာတယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိ သမီးမျက်နှာကိုပဲ ကြည့်မ၀ဘူး။
ရွာသူတွေကိုတော့ အပျိုကြီးတွေ မလုပ်ခိုင်းပါနဲ့နော်။ အစွမ်းအစရှိသော မိန်းမများ အပျိုကြီး မလုပ်ကြပါ ..
ဥပမာ အမေစု အပျိုကြီး မလုပ်ပါ။
မိန်းကလေးနဲ့ ယောင်္ကျားလေးက ဗီဇချင်းကွာတာဖြစ်မယ်။
အိမ်မှာလည်း တူတွေငယ်ငယ်က မျောက်ရှုံးအောင် ဆော့ကြလို့ တူမတွေကို ပိုချစ်တယ်။
အဲဒါကြီးလာတော့ တူတွေက တူ မချစ်၊ တူမ ချစ် လို့ စကားနာ ထိုးတယ်။
သိတတ်လာတဲ့အချိန်ကျတော့ ကိစ္စကြီးငယ်တွေမှာ တူတွေက အားကိုးရတော့ သူတို့ကိုလည်း ချစ်လာတာပါပဲ။
ကိုယ်က တူတွေကို မျက်နှာသာမပေးမှန်းသိတော့ သူတို့ကလည်း ကိုယ့်ဆိုရင် မဆိုးရဲဘူး။
အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရရင် အစွမ်းအစမရှိလုိ့ကို အပျိုကြီးဖြစ်တာ။
အားနာနေကြလို့သာ မပြောကြတာဆိုတာ သဘောပေါက်ပြီးသား။ :-DD
ကလေးတွေ သောင်းကျန်းလွန်းလို့ ခါးမှာကြိုးချည်ပြီး အိမ်တိုင်နဲ့ တွဲထားရသတဲ့…
ယောက်ျားလေးက မျောက်ရှုံးအောင်ဆော့မှ၊ မတော် ယောက်ပြားလေးဖြစ်သွားဦးမယ်…
(PS- သဂျီးက အော်မေ့ဂိုဏ်းကို ပွိုင့်လျှော့မယ်တဲ့ ဟီ ဟိ)
အမှုဆိုတာ ဦးအောင် စွဲရတယ်။
ကျောက်စ်ကို အော်မေ့ဂိုဏ်းဖြိုခွဲမှုနဲ့ တစ်ရာစွဲပါတယ်။
အော်မေ့ဂိုဏ်းကို တောင်းပန်တဲ့အနေနဲ့ ဟင်းပွဲတစ်ရာ ချက်ကျွေးဖို့ ပြောတာ။ :loll:
၀က်ခြံဆိုတော့ လေ ပါးပေါ်မှာပေါက်တဲ့ ၀က်ခြံမှတ်နေတာ ။ ခုလဲ ၀က်ခြံပေါက်နေတာဆိုတော့ ခပ်မြန်မြန်ဝင်ဖတ်ပစ်လိုက်တာပေါ့ မှန်းချက်နဲ့ လွဲသွားတယ် ။ ဒါပေမယ့် နောက် သုံးလေးနှစ်ဆို အသုံးဝင်လာမှာမို့ သေသေချာချာ မှတ်သားသွားပါကြောင်း